"Cid Saf Ugu Jirta Shaqada Tababare Ee Man United Ma Jirto, Waa Shaqo 700 Milyan U Baahan" | Laacib.net
“Cid Saf Ugu Jirta Shaqada Tababare Ee Man United Ma Jirto, Waa Shaqo 700 Milyan U Baahan”
October 10, 2019 Balaleti 1
Khabiirka Sky Sports Paul Merson ayaa sheegay inaysan jirin cid saf ugu jirta shaqada tababare ee Manchester United haddii la ceyriyo tababaraha reer Norway Ole Gunnar Solskjaer.
Waxa uu sheegay in tababaraha bedeli doona Solskjaer inuu u baahnaan doona inuu dib u dhis ku sameeyo kooxda taasoo keeni doonta inay qarashgareeyaan lacag gaareysa 700 milyan euro.
Maqaalkiisa isbuuclaha ee uu ku qoray mareegta Sky Sports, Merson ayaa yiri:
“Waan ka xumahay dhibka Ole Gunnar Solskjaer ku heysta United. Wuxuu kooxda yimid waqti qaldan. Qaladkiisa waxay aheyd inuu iibiyay goolal. Romelu Lukaku waxa uu ahaa gooldhaliyahooda, ma aheyn xiddig daafacyada garbaha ceyrsanaya laakiin waxa uu ahaa nin kubada shabaqa dhex dhigi kara. Waana wax looga baahnaa.
“Yaa doonaya shaqada Manchester United? Waa shaqo weyn in England ama Manchester United tababare laga noqdo. Laakiin ma arko cid saf ugu jirta sababtoo ah waxa ay milyan mayl ka danbeeyaan kooxaha kale. Qofkii tababare ka noqdo wuxuu isweydiinayaa ‘halkee geyn karaa kooxdaan?’. Waa shaqo u baahan lix ilaa todoba milyan ginni.
“Tababare sida Allegri ah ayaa imaan kara xagaaga danbe, haddii aad dooneysid inaan fursad siiso waa inaad gacanta u geliysaa 700 milyan ginni. Waxa uu doonayaa todobo ciyaaryahan, maanta suuqa xiddig fiican kuma heleysid lacag ka yar 70 milyan ginni.
“Waxaad eegtaa isbedelka dhacay, Manchester United waxay joogaa halkii ay Liverpool joogtay lix ama todobo sannadood ka hor, waxaad is weydiineysaa sidee ayay ku dhacday?
“Liverpool dib ayay isku dhistay, waxay dhiseen koox gaar ah, United dhanka kale ayay aaday. Ma garanayo wixii dhacay. Xaqiiqdii ma garanaya waxa ku dhacay. Waa wax cabsi leh.”